रूखले कभर गर्दछ → धातु र कास्ट फलामका रूख ग्रिलहरू ITY CITY डिजाईन
अब सानो शहरी वास्तुकला यो पनि रूख ढाक्छ. यी कार्यात्मक र सौंदर्य तत्वहरू विभिन्न सामग्रीमा बनाउन सकिन्छ।
रूखहरू भित्र शहरी ठाउँ हरियो परिवेशमा बसोबास गर्नेहरूको स्वास्थ्य, आराम र सौन्दर्य भावनाहरूको ग्यारेन्टी हो। रूखहरूले हावालाई शुद्धिकरण गर्दछ, अक्सिजन उत्पादन गर्दछ, तातो दिनमा वातावरणीय तापमान कम गर्दछ, हावा आर्द्रता बढाउँदछ, पानी व्यवस्थापन सुधार गर्दछ र शहरको आवाज र हावाको शक्ति कम गर्दछ।
जे होस्, तिनीहरूको विकास र सही विकासको लागि, तिनीहरूलाई हानिकारक घटनाहरूबाट सुरक्षित गर्नुपर्दछ जसले तिनीहरूलाई नष्ट गर्न सक्दछ।
यसैले रूखको आवरण बढ्दो रूपमा प्रयोग गरिन्छ, जुन केवल भित्रमा मात्र उपयुक्त हुँदैनन् पार्क र वर्गहरूमा, तर यो पनि प्रमोनेड र शहर केन्द्रहरूमा।
कभरले रूखहरू जनावरहरू, पैदल यात्रीहरू र तिनीहरूमाथि ड्राइभिंग कारहरूबाट जोगाउँछ।
रूख रक्षक र धातु र कास्ट फलामका रूख ग्रेरेटहरू
रूख रक्षकहरू र धातु र कास्ट-फलामका रूखका ग्रेरेटहरूले केवल सहरी अन्तरिक्षमा मात्र नभएर बोटहरूमा अवस्थित बोटहरूको लागि सजावटी संरक्षण सिर्जना गर्दछ बगैचा.
तिनीहरू विभिन्न आकार र आकारमा उत्पादन गरिन्छ।
कास्ट फलामको रूख कभरहरूमा कुनै शहरी र उपनगरको स्थानको लागि अनुकूल र आधुनिक डिजाइनहरू छन्।
यो पनि हेर्नुहोस्: पार्क, शहर र बगैचा बेन्चहरू
तिनीहरूको सुरक्षाको लागि रूखयुक्त रूखहरू क्षैतिज वा ठाडो हुन सक्छ।
आवरणहरू, क्षैतिज रूपमा डिजाइन गरिएको, अर्थात् रूखको ग्रेट्स, पानीको स्वतन्त्र प्रवाह सुनिश्चित गर्दै कुनै पनि यांत्रिक क्षति विरूद्ध रूखको जड प्रणालीको सुरक्षा गर्दछ।
ठाडो रूख ढाक्छ तिनीहरूले सुरक्षात्मक र सौन्दर्य कार्यहरू गर्छन्, राहदानीहरू, सवारी साधनहरू वा जनावरहरूबाट धम्की बिना बोटबिरुवाको नि: शुल्क विकास सुनिश्चित गर्दछन्।
प्रयोग गरिएको रूख कभरको उपयुक्त शैलीले तिनीहरूलाई साना वास्तुकलाको शहरी ठाउँको सजावटको एक तत्व बनाउँदछ।
रूखहरूको लागि कार्यात्मक र सुरुचिपूर्ण धातु कभरहरू रूखहरूको लागि अत्यन्त वांछनीय सुरक्षा हो, र तिनीहरूको आधुनिक आकार र रंगहरूका लागि धन्यवाद, तिनीहरू सार्वजनिक स्थानहरूको आभूषण बन्छन्।
रूख कभरहरू लाई सानो वास्तुकला, जुन सफलतापूर्वक सहरी विकासमा अवस्थित छ, जहाँ शहरी हरियाली सीमित स्थानमा प्रयोग गरिएको छ, किनमेल र सञ्चार मार्गहरूको संरचनामा प्राकृतिक सजावटको रूपमा।
रूखहरूको लागि धातु कभरहरू शहरी वनस्पतिहरू जोगाउने सौन्दर्य समाधानहरू हुन्, तर एकै साथ जड प्रणालीमा पानीको निःशुल्क बहाव अनुमति दिन्छ।
यो पनि हेर्नुहोस्: साइकल र्याक - प्रकार र फाइदाहरू
शहरका रूखहरू विशेष गरी क्षतिको लागि जोखिममा छन्, रासायनिक क्षति मात्र होइन, उदाहरणका लागि अत्यधिक कार निकासको धुवाँले गर्दा हो, तर यांत्रिक क्षति पनि। त्यसैले तिनीहरूलाई विशेष हेरचाह आवश्यक छ। त्यसकारण, सीमित स्थान र भारी वाहन र पैदल यात्रीहरू सहित ठाउँहरूमा, सहरी हरियो क्षेत्रहरू विशेष सुरक्षा गर्नुपर्दछ। उपयुक्त रूखको आवरणले प्लान्टलाई केवल तोडफोड विरूद्ध मात्र सुरक्षित गर्दछ, तर अन्य कारकहरू विरूद्ध पनि।
कास्ट फलाम र धातुले बनेका क्षैतिज ग्रिलहरू र ठाडो कभरहरू बाह्य कारकहरू र यांत्रिक क्षतिप्रति अत्यन्त प्रतिरोधी हुन्छन्, त्यसैले तिनीहरू पूर्ण रूपमा रूखहरूको सुरक्षा गर्दछन्। रूखको आवरणका तत्वहरू, उचित रूखहरू र सहरी ठाउँहरूमा मिल्दछ, ठाउँको अतिरिक्त सजावट हो।
परम्परागत वा आधुनिक रूखको र ढाँचा कभर ढाँचा सही शहरी ठाउँ को चरित्र मा फिट बैठ्छ।
ठाडो रूख रक्षकहरू घरको बगैंचा र बगैचामा पनि प्रयोग गरिन्छ, जहाँ तिनीहरूले फलफूलका रूखहरू जम्मा गर्ने रूखहरू र रूखहरूको पात कुह्न सक्ने जनावरहरूले हुने क्षतिबाट जोगाउँछन्। फल रूख कभर तिनीहरू शहरहरूमा जस्तै आवश्यक छन्, किनकि तिनीहरूले बगैंचा र नर्सरीमा बिरूवा सुरक्षा सुनिश्चित।
कहिलेकाँही जंगली खेल वा घाँस काट्ने ब्लेडले रूखहरुलाई अपरिवर्तनीय रूपमा क्षति पुर्‍याउँछ, विशेष गरी सबैभन्दा कान्छो नमूनाहरू। उपयुक्त रूख कभरहरूले तिनीहरूलाई शान्तसँग बढ्न अनुमति दिनेछ।
साना प्वाल भएका रूखहरूले विशेष गरी जाडोको मौसममा राम्रो प्रमाण दिन्छ, जब खरायो र हिरणले खाना खोज्दैछन् र बगैंचामा रूखहरूमा उत्सुकतासाथ चुप लाग्छ। त्यस्ता आवरणहरूले रूखलाई पर्याप्त भेन्टिलेसन र प्रकाश प्रदान गर्दछ, र एकै साथ जनावरहरूलाई रूखको खोप बिग्रनबाट रोक्छ।
रोप्ने क्रममा फलफूल र सजावटी झाराहरूको जरामा क्षति नपुग्नको लागि रूखको आवरण प्रयोग गर्नु फाइदाजनक छ जसले जरालाई ढाक्छ र रूखहरूको वरिपरि घाँसको वृद्धिलाई रोक्छ।
रूख कभरहरू बगैंचाको बोटबिरुवाहरू र शहरी हरित क्षेत्रहरूलाई म्याकेनिकल क्षति बिरूद्ध रोक्नको लगातार तत्व भएका छन्। कभरको अतिरिक्त, रूखका विभिन्न प्रकारका ग्रेटहरू रूखको जरा प्रणालीलाई क्षतिबाट बचाउन र रूखमा पानी पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रयोग गरिन्छ।
यो पनि हेर्नुहोस्: कंक्रीट पोष्टहरू
4.9 /5( 29 वोट )
रूखहरु को लागी accro casingsरूख ग्रेटरूख जाली मूल्यफाउन्ड्री रूख gratingरूखहरूको लागि इस्पात धन्यवादरूखहरूको लागि फलामको ग्रेटहरू कास्ट गर्नुहोस्रूखहरुको मूल्य को लागी फलामको ग्रेटिings्गरूख कभरको लागि सानो वास्तुकलारूखहरूको लागि धातु कभरफलाम फाउन्ड्री रूख ग्रेटरूख ढाक्छभेल्रो रूखहरूको लागि क्यासिंगकास्टोरमा रूखहरूको लागि क्यासिंगरूख कासिंग मूल्यलेरोइ मर्लिन ट्री क्यासिंगनिलो रूखहरूको लागि कभर गर्दछओबी रूखहरूको लागि क्यासिंगओलक्स रूखहरूको लागि कभर गर्दछफल रूखहरु को लागी casingsफल रूखहरू Allegro को लागी casingsफल रूख कासिंग मूल्यफल रूख क्यासिंग बिक्रीरूख कासिंग निर्मातारूखहरूको लागि सुरक्षा कवहरूरूखहरूको लागि जाल कभररूख रक्षक र धातु र कास्ट फलामका रूख ग्रेरेटहरूरूखहरूको लागि धातु कभररूख ढाक्छरूख मूल्य कभररूखले सानो वास्तुकलालाई समेट्छफल रूखहरु को लागी कभरछिद्रित रूख क्यासिंगछिद्रित रूख क्यासिंग मूल्यसस्तो रूख कभररूखहरूको लागि फलामको कभरहरू